Abakhiqizi nabaphakeli beCOVID-19 Antigen Test Uncut Sheet I-Immuno
Ishidi Lokuhlola i-COVID-19 Antigen Sheet
Isetshenziselwe i- Ama-antigen we-SARS-CoV-2 COVID-19
I-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (i-COVID-19 Ag) iyi-immunoassay esheshayo yokuthola ukutholakala kwekhwalithi ye-coronavirus yenoveli i-SARS-CoV-2 emphinjeni womuntu kanye nezicubu zamakhala.
I-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test eyokuthola ama-antigen akwa-SARS-CoV-2. Ama-anti-SARS-CoV-2 antibodies monoclonal agqokiwe kulayini wokuhlola futhi ahlanganiswa negolide le-colloidal. Ngesikhathi sokuhlolwa, isampuli liphendula ngama-anti-SARS-CoV-2 antibodies ahlangana emgqeni wokuhlola. Ingxube bese inyukela phezulu kulwelwetshe lwe-chromatographically ngesenzo se-capillary bese iphendula nenye i-anti-SARS-CoV-2 antibodies monoclonal esifundeni sokuhlola. Isakhiwo siyabanjwa bese sakha umugqa onemibala esifundeni somugqa wokuhlola. I-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test iqukethe ama-anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies ahlanganiswe izinhlayiya kanti amanye ama-anti-SARS-CoV-2 monoclonal avalwe ezifundeni zomugqa wokuhlola.
Imizuzu engu-10-15 ithola umphumela wokuhlola
B. Ngokuzwela okungaphezulu kwama-95% nokucaciswa
Ukusebenza okulula, imishini yesidingo
D. Dinga i-Nasal and Saliva Specimen engaphansi
E. Kokubili i-nasal swab ne-Saliva swab test ene-accuarcy ephezulu
Ikhithi ingagcinwa ekamelweni lokushisa noma efrijini (2-30 ° C). I-Test Strip izinzile ngosuku lokuphelelwa yisikhathi ephrintwe esikhwameni esivaliwe. I-Test Strip kufanele ihlale esikhwameni esivaliwe kuze kube yilapho isetshenziswa. UNGAKHULU. Ungasebenzisi ngaphezu kwedethi yokuphelelwa yisikhathi. Ukusimama kwekhithi ngaphansi kwale mibandela yokugcina izinyanga eziyi-18
Ukuqoqwa kwesifanekiso nokulungiselela
I-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (i-COVID-19 Ag) ingenziwa kusetshenziswa uketshezi lomphimbo nezicubu zamakhala.
● Uketshezi Lomphimbo: Faka i-swab oyinyumba emphinjeni. Sula ngobumnene imfihlo ezungeze udonga lwepharynx.
● Ukwehla Kwamakhala: Faka i-swab oyinyumba emgodini ojulile wamakhala. Zungezisa ngobumnene i-swab odongeni lwe-turbinate izikhathi eziningana. Yenza i-swab imanzi ngangokunokwenzeka.
● Qoqa u-0.5ml wesifinyezo sesilingo bese usifaka kuthubhu yokuqoqa isampula. Faka i-swab kushubhu bese ucindezela ishubhu eliguquguqukayo ukukhipha isampuli kusuka ekhanda le-swab. Yenza isampuli ixazululwe ngokwanele kusikhumbuli sesilingo. Faka ithiphu ye-crystal kushubhu yokuqoqa isampuli.
Isilingo kufanele senziwe ngokushesha emahoreni ama-2 ngemuva kokulungiselelwa kwesifanekiso. Uma i-assay ingakwazanga ukuthwalwa ngokushesha, isampuli elungiselelwe kufanele igcinwe ingadluli emahoreni angama-24 ku-2-8 ° C noma izinsuku eziyi-7 ku- -20 ° C.
Letha ama-specimens ekamelweni lokushisa ngaphambi kokuhlolwa. Ama-specimens afriziwe kumele ancibilikiswe ngokuphelele futhi ahlanganiswe kahle ngaphambi kokuhlolwa. Ama-specimens akufanele afriziwe futhi ancibilikiswe kaningi ngaphezu kwezikhathi ezimbili. Uma izibonelo zizothunyelwa, kufanele zipakishwe ngokuhambisana nemithetho yenhlangano emboza ukuthuthwa kwama-etiologic agents.
- Okuhle (+): Kuvela imigqa emibili enemibala. Ulayini owodwa onemibala kufanele uvele njalo esifundeni somugqa wokulawula (C) bese omunye umugqa kufanele abe sesifundeni se-T line.
QAPHELA: Ukuqina kombala ezifundeni zomugqa wokuhlola kungahluka ngokuya ngobuningi be-SARS-CoV-2 ekhona esithombeni. Ngakho-ke, noma imuphi umbala wombala esifundeni somugqa wokuhlola kufanele ubhekwe njengokuhle futhi urekhodwe kanjalo.
- Okubi (-): Umugqa owodwa onemibala uvela esifundeni somugqa wokulawula (C). Awukho umugqa ovela esifundeni se-T line.
- Akuvumelekile: Umugqa wokulawula wehluleka ukuvela. Ivolumu yesampuli enganele noma amasu wenqubo angalungile yizizathu ezingaba khona zokwehluleka komugqa wokulawula. Buyekeza inqubo bese uphinda isivivinyo ngokuhlola okusha. Uma inkinga iqhubeka, yeka ukusebenzisa ikhithi yokuhlola ngokushesha bese uxhumane nomsabalalisi wakho wasendaweni.
1. I-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (i-COVID-19 Ag) ingeye-vitro diagnostic diagnostic kuphela. Lokhu kuhlolwa kufanele kusetshenziselwe ukuthola ama-antigen akwa-SARS-CoV-2 emphinjeni womuntu kanye nasezimpumulweni zamakhala
2. I-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (i-COVID-19 Ag) izokhombisa kuphela ubukhona ku-SARS-CoV-2 kwisifanekiso futhi akumele isetshenziswe njengeyona ndlela yokuthola ukuxilongwa kwezifo ze-SARS-CoV-2 .
3. Imiphumela evela ezigulini ezicindezelwe ukuzivikela komzimba kufanele ihunyushwe ngokuqapha.
4. Uma uphawu luphikelela, kanti umphumela ovela ku-COVID-19 Rapid Test ungumphumela omubi noma ongasebenzi, kunconywa ukuthi uphinde usampule isiguli ezinsukwini ezimbalwa sekwephuzile noma uvivinye enye into yokuhlola efana ne-PCR.
5. Njengakuzo zonke izivivinyo zokuxilonga, yonke imiphumela kufanele ihunyushwe kanye nolunye ulwazi lomtholampilo olutholakala kudokotela.
6. Uma umphumela wokuhlolwa ungemuhle futhi izimpawu zomtholampilo ziqhubeka, kunconywa ukuhlolwa okwengeziwe usebenzisa ezinye izindlela zokwelashwa. Umphumela ongemuhle awunqabeli nganoma yisiphi isikhathi ukuthi kungenzeka ukutheleleka nge-COVID-19.
7. Imithelela engahle ibe khona yemithi yokugoma, imishanguzo elwa namagciwane, imithi elwa namagciwane, imithi yokwelapha ngamakhemikhali noma imishanguzo yokuzivikela ayikahlolwa ekuhlolweni.
8. Ngenxa yokwehluka okukhona phakathi kwezinqubo, kunconywa kakhulu ukuthi, ngaphambi kokushintsha kusuka kubuchwepheshe obubodwa buye kolandelayo, kwenziwa izifundo zokuhlanganisa izindlela ukuze kutholakale umehluko wobuchwepheshe. Isivumelwano samaphesenti ayikhulu phakathi kwemiphumela akufanele silindelwe ngenxa yokwehluka phakathi kobuchwepheshe.
9. Ukusebenza kusungulwe kuphela ngezinhlobo zezinhlobonhlobo ezibalulwe Kusetshenziswa Okuhlosiwe. Ezinye izinhlobo zezinhlobo zezinhlobo zezinhlobo zazo azikaze zihlolwe futhi akufanele zisetshenziswe nalesi silingo.
Langaphambilini I-SARS-CoV-2 Neutralizing Test Antibody Rapid
Olandelayo: Ishidi lokusika elingavaliwe le-COVID-19 Igg Igm
i-coronavirus Antigen yokuhlola ikhithi
ukuhlolwa komkhuhlane i-antigen
umkhuhlane test antigen okusheshayo
ukutholwa okusheshayo kwe-antigen
ukuhlolwa kwe-antigen okusheshayo
Ishidi lokusika elingavaliwe le-COVID-19 Igg Igm